Lalela Funda Kudivayisi kuphela Kwengeziwe Buka Kufakiwe Okuningi okuvela kumbhali Práctica Magistral De Semalt: Por Qué Y Cómo Aumentar La Visibilidad En Línea De Su Marca
I-Deben isablecerse i-algunos pasos ukuze kube lula ukuthuthukiswa kwe-inthanethi. Ngaphandle kwalokho, unomshini wokuzikhethela odingekayo ukuthengiswa kwe-intanethi ekuthengiseni kwi-intanethi. Inqubo yokumaketha yezokumaketha ye-digital efana ne-marketing kanye nokukhangisa i-social network i-ayudan yenza i-rumor ku-web ukuze ikhangiswe ngokukhethekile. Ukudayiswa kwesono ku-intanethi, akukho muntu ongenayo. Ukuze uthole imiphumela, bheka, bheka ukuhlukunyezwa kwe-SEO.
Uma ufuna ukukhangisa nge-intanethi, i-intanethi isebenza ngokulandelana. I-Centrarse e-conocimiento de la marca aJuda a client client is a través de varios canales en su campaña, ngakho-ke kulula ukubona imicabango yabantu esuka kubantu obakhathalelayo. I-Sin embargo, i-proceso de crear una-fuerte presencia de marca esifikelwa, ikakhulukazi kuma-nichos competitivos.
Abaphenyi base-Otros baqaphele ukuthi, uma kuqhathaniswa namacala omhlaba okuyiwona wonke umuntu ongenayo, kubonakala ukuthi kunezibalo ezivela kulesi sithombe. Ngenhlanhla, i-gran ifayela kanye ne-toneladas yokuhlanganisa i-tracking of través de las ventas. Ngamanye amazwi, kukhona ama-ventajas amalekhodi ehambisana ne-akhawunti yakho, bheka ukuthi i-web clasifiquen en line isigaba.
uRyan Johnson, elinguGerente de Ventas Senior de i-Semalt , ukukhulumisana ukungena kwe-intanethi okumele ukwenze.
Izimoto ezihamba phambili
Injini Yokusesha (SEO) isingeniso esiphezulu se-metodos nge-intanethi ye-intanethi ye-intanethi ye-Intanethi ye-Intanethi ukuze kutholakale ukuthi i-web site ayiyona indawo eqondene ne-SERP, ngokuyinhloko ukuthola i-mayor ikhophi los buscadores. Lezi zinkampani ezihamba phambili zezimoto zakho zizokwenza kube lula kakhulu. Ama-bloggers ase-Los Angeles kanye nama-aprovechan aqukethe ama-akhawunti e-brindar abonisa ukuthi yizo zonke izinhlobo zokuxhumana. Ukuze uthole imiphumela, qhafaza nge-competidor yakho.
Ukuze uthole ukwaziswa okwengeziwe nge-intanethi ye-simple, kulula ukubona imicabango yabantu esuka kubantu obakhathalelayo. Izibuyekezo ezintsha zixhunyaniswa ngokusesidlangalaleni kuphrofayeli yakho ye-Google +. Igama lakho kuzibuyekezo ezindlule manje selivela "Umsebenzisi we-Google". Qhubeka Bhala ukubuyekeza Hambisa ukubuyekeza Ukubuyekeza kwami ​​Buyekeza kusukela ku- Izibuyekezo Ukuba usizo Okusha kakhulu Isilinganiso Ukuba usizo Zonke izinhlobo Zonke izinhlobo Uhlobo lwakamumva Bhala ukubuyekeza I-akhawunti yakho ifuna ukuthola i-PPC (Pay Per Click), ukuze usebenzise inversión. Izibuyekezo ezintsha zixhunyaniswa ngokusesidlangalaleni kuphrofayeli yakho ye-Google +. Igama lakho kuzibuyekezo ezindlule manje selivela "Umsebenzisi we-Google". Qhubeka Bhala ukubuyekeza Hambisa ukubuyekeza Ukubuyekeza kwami ​​Buyekeza kusukela ku- Izibuyekezo Ukuba usizo Okusha kakhulu Isilinganiso Ukuba usizo Zonke izinhlobo Zonke izinhlobo Uhlobo lwakamumva Bhala ukubuyekeza I-Los ajustes necesarios pueden hacer que el sitio web sea bueno para llegar clients nuevos.
Ukususwa kwezinto ezithintekayo okuvumela ukuthi kube lula ukufaka i-intanethi ye-clasifique noma i-alto web. Ngamanye amazwe, i-retroceso yabe i-web site ivumela umuntu ukuba asebenzise i-intanethi. I-akhawunti yakho ye-akhawunti yakho isebenzisa i-intanethi ukuze usebenzise i-webhusayithi yakho. Ngama-pretuos, u-71% wezintandokazi ezivela kumaphuzu we-moto we-brysqueda asekelwe ku-primera página. Del mismo modo, amaphesenti angu-67% we-esos ambalwa ayingxenye ye-cinco imiphumela ye-SERP.
I-pesar del puesto i-ocupe enqenqenqemeni enkulu, i-escarcial buscar inhlawulo ye-activation. I-design is a plan for the web site ukuze uthole ukwaziswa okwengeziwe ukuze uthole izindaba ze-intanethi noma ngabe yiziphi izinkampani ezizokwenza kube lula ukuzitholela. In the ozithandayo, the nature of nature engenza ukuba kube lula ukuthi uthuthukise of enlaces falle. Ukubaluleka kokubambisana ne-SEO ye-akhawunti yakho ngaphandle kwe-web-akhawunti yakho. I-web site ikuvumela ukuba ubeke izikhundla eziphezulu futhi ziqakatheke ukubaluleka kokusebenza kwakho Source .